Miyaad udiyaarineysaa steroid xooggan oo ku guuleystay kalsoonida rugaha caafimaadka? Waa hagaag, methyltestosterone waa inuu ahaado xulkaaga xiga. Soo ogow faa'iidooyinka isticmaalka daroogada, taariikhdeeda ku jirta habdhismeedka jirka jirka iyo caafimaadka, saameynta daawada, iyo sida loo iibsado qiyaasta. Hordhac Dhismaha jirka ma aha mid ku saabsan ku biiritaanka jimicsiga maxaliga ah iyo sameynta jimicsiga jirka ee xooggan. Waxaad u baahan tahay inaad sameyso wax ka badan inta aad shaqeyneyso. Ka dib ...
Wax kasta oo ku saabsan Dihydroboldenone 1.Waa maxay Dihydroboldenone / DHB? 2. Dihydroboldenone / DHB qiyaasta 3.Dihydroboldenone / wareegga DHB 4.Dihydroboldenone / DHB natiijooyinka 5.Dihydroboldenone / DHB Saameynada 6.Dihydroboldenone / DHB Nolosha 7.Dihydroboldenone / DHB ee lagu jarayo 8.Dihydroboldenone / DHB oo loogu talagalay duufsiga 9.Dihydroboldenone / DHB 10.Dihydroboldenone / DHB faallooyinka 11.Dihydro ...
Wax walba oo ku saabsan Proviron 1.Waa maxay Proviron? Sidee u shaqeysaa? 2. Qalabka Proviron 3.Proviron wareegga 4. Natiijooyinka natiijooyinka 5.Proviron Nolosha Nolosha 6.Proviron ee lagu yareeyo 7.Proviron ee qadarinta 8.Proviron Faa'iidooyinka 9.Proviron dib u eegis 10.Proviron iibinta 11.Proviron for Bodybuilding -Summary 1. Waa maxay Proviron? Sidee u shaqeysaa? Proviron waa magac calaamad ah oo loogu talagalay ...